DAAWO Sheekh Umal oo Jawaab Kulul Siiyay Xildhibaankii u gefay Diinta islaamka - Banaadisom
Home Wararka Maanta DAAWO Sheekh Umal oo Jawaab Kulul Siiyay Xildhibaankii u gefay Diinta islaamka
DAAWO Sheekh Umal oo Jawaab Kulul Siiyay Xildhibaankii u gefay Diinta islaamka
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur oo maalmo ka hor ka hadlayey amniga magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inay ka go’een in salaadda ay ku dukadaan masaajidda, isagoo eedeyn la xariirta amniga u jeediyey culumada magaalada.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in culumada masaajidda Gaalkacyo aysan khudbada uga hadlin dhacdooyinka ka jira magaalada.
“Maalintii guddoomiyihii aniga iga horeeyey la qarxiyey oo dad badan oo aniga ehelkeyga ah isku meel lagu laayey, Jimcihii ku xigay waxaan dhageystay khudbadda masaajidkii ii dhawaa, waxuuna Sheekhii uga hadlay ‘Tarabiyatu awlaad,” ayuu yiri Guddoomiye Cabdiladiif Muuse.
Waxa uu sheegay in Sheekh laga rabay todobaadkaas wixii magaalada ka dhacay inuu ku qaato khudbadda.
HALKAN RIIX KA DAAWO MUUQAALKA
“Culumada waxaan u sheegayaa masaajidda kaligiin ku dukan meysaan ama waan xireynaa ama Shabaab waan la wada dirireynaa,” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Sidoo kale guddoomayaha ayaa sheegay in culumada uu horay ula kulmay, isla markaana uu u sheegay in masaajidku uusan ‘waxaba ugu fadhin oo Adinkiisuna uu dhibo’ sida uu sheegay, isagoo tilmaamay in masaajidda ay xiri doonaan ama si nabad ah ay ugu wada dukan doonaan.
Hadalka guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland waxaa ka jawaabay Sheekh Maxamed Cabdi Umal, waxuuna hadalkaas iyo sacabkii shacabka goobtaas fadhiyey ku tilmaamay mid laga naxo.
“Waxaan is iri ninkan ma culumo gooni ah ayuu ka hadlayaa? laakiin markaan dib u sii dhageystay hadalkiisa culumada oo dhan ayuu ka hadlayaa, marka hadalka noocaas ah oo qof muslim ah uu ku dhiiraday oo sidaas baraha bulshada loogu faafiyey oo hadana qof masuul ah uu ka soo yeeray, waa arrin runtii aad iyo aad looga naxo,” ayuu yiri Sheekh Umal.
Sheekh Umal oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in Guddoomiye Cabdiladiif hadii uu awood u leeyahay uu albaabada isugu dhifan lahaa masaajidda magaalada, sida madaxweynaha Faransiiska Macron oo kale. 5fe88f19d30bf
Previous articleDEG DEG: DF oo Amar layaab leh kusoo rogtay shirkadaha ka shaqeeya banaanbaxyada Muqdisho
Next articleLamaane 6-sano carruur rajeyMaxamed Faahim & Marwadiisa Faaduma Shafna waxa ay muddo 6-sano oo ay is qabaan sugayeen carruurta ay isku dhalaan, rajadooda wanaagsan ayaa hirgashay 18-kii November 2020 kadib markii alle uu siiyay Wiil. 7-dii December 2020, xili saq dhexe ah waxaa kusoo booday wiilkooda xannuun oo waxaa uu awoodi waayay neefsashada Dabiiciga ah, kadib markii ay geeyeen Isbitaal ku yaalla Dalka Sri Lanka waxaa lagu wargeliyay in wiilkooda yar Shaykh uu ku dhacay Xannuunka Covid-19! Sida uu dhigayo xeerka dalkaas dhaqaatiirtu way ka reebeen wiilkooda si looga daweeyo daweeyo cudurka ku dhacay oo ah mid faafa ama Bulshada isaga kala gudba sida ay warbaahinta u sheegeen lamahaanaan. Si gaar ah waxaa la jiifiyay isbitlaaka Carruurta ee Lady Ridgeway oo ah kan ugu wanaagsan Caasimadda Colombo, maadaama daryeel uu u baahan yahay wiilkaan ay iska dhaleen Aabaha & Hooyada Muslimka ah. “Waxa ay noo sheegeen in wiilku uu xaalad culus ku sugan yahay oo uusan awoodin in uu neefta u qaato si dabiici ah, balse bartamaha habeenkii waxa ay dhaqaatiiru inoo sheegeen in baaris lagu sameeyay laga helay Covid-19” Sidaasi waxaa yiri Maxamed Faahim. Intaas kadib waxaa la baaray Aabaha & Hooyada Wiilkaan yar balse waa laga waayay xannuunka Covid-19, maalin kadib waxaa lagu wargeliyay in uu dhintay wiilkooda yar ee la dhigay isbitaalka gaarka ah. Sida uu dhigayo Xeer ay dejisay Dowladda Sri Lank waxaa la gubayaa Maydka bukaanka u dhintay Covid-19, Maxamed Faahim waxa uu maamulka isbitaalka ka dalbaday in uu saxiixo si fasax loogu helo gubista wiilkiisa. Faahim wuu diiday in uu saxiixo, maadaama Diinta Islaamka aysan ogoleen in qofka la gubo, looma baajin in la gubo wiilka jira 20-ka cisho, Dowladda ayaa ku dhaqaaqday in ay dab-qabadsiiso. Dibadbaxyo ay dhigeen Muslimiinta Sri Lank waxa ay ku dalbadeen in la joojiyo gubista Maydka, maadaama Diinta islaamka ay reebtay in la gubo qofka, inkasta oo aysan ka jawaabin Dowladda dalabkaas.nayay oo lagu hor gubay Wiilkooda oo 20-Cishe Dhallan!